Emegharịrị usoro kuki a na 28/06/2021 ma metụta ụmụ amaala na ndị bi na European Economic Area na-adịgide adịgide.
1. Okwu Mmalite
Weebụsaịtị anyị, https://comme-un-pro.fr (nke a gasị: "weebụsaịtị ahụ") na - eji kuki na teknụzụ ndị ọzọ metụtara ya (maka ịdị mfe, teknụzụ ndị a niile ka akpọpụtara "kuki"). Ndị ọzọ anyị tinyere na-etinye kuki. N'ime akwụkwọ dị n'okpuru, anyị na-agwa gị maka iji kuki na weebụsaịtị anyị.
2. Kedu ihe bụ kuki?
Kuki bụ obere faịlụ dị mfe ezitere na ibe nke weebụsaịtị a ma chekwaa ihe nchọgharị gị na draịvụ kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ. Enwere ike izipu ozi echekwara ebe ahụ na sava anyị ma ọ bụ na sava nke ndị ọzọ dị mkpa na nleta ọzọ.
3. Kedu ihe bụ edemede?
Ederede bụ otu koodu nke ejiri mee ka weebụsaịtị anyị rụọ ọrụ nke ọma na mmekọrịta. A na-egbu koodu a na sava anyị ma ọ bụ na ngwaọrụ gị.
4. Gini bu ihe anaghi ahu anya?
Ihe ngosi a na-adịghị ahụ anya (ma ọ bụ mgbama weebụ) bụ obere mpempe ederede ma ọ bụ ihe oyiyi na-adịghị ahụ anya na weebụsaịtị, ejiri soro okporo ụzọ na weebụsaịtị. Iji mee nke a, a na-echekwa data dị iche iche gbasara gị site na iji mkpado ndị a na-adịghị ahụ anya.
5.1 Kuki teknụzụ ma ọ bụ arụmọrụ
Cookiesfọdụ kuki na-ahụ na akụkụ nke weebụsaịtị ahụ na-arụ ọrụ nke ọma yana na-etinye mmasị gị dị ka onye ọrụ. Site na itinye kuki arụ ọrụ, anyị na-eme ka ọ dịrị gị mfe ileta weebụsaịtị anyị. Nke a pụtara na ịkwesighi itinye otu ozi ahụ ugboro ugboro mgbe ị gara na weebụsaịtị anyị yana, dịka ọmụmaatụ, ihe ndị ahụ na-adị n'ụgbọ ahịa ịzụ ahịa gị ruo mgbe ịkwụ ụgwọ gị. Anyị nwere ike idowe kuki ndị a na-enweghị nkwenye gị.
5.2 kuki nchịkọta akụkọ
Ebe ọ bụ na a na-enyocha ọnụ ọgụgụ na-enweghị aha, enweghị ikike ịbọrọ ka etinye kuki ndekọ ọnụ ọgụgụ.
5.3 Kuki mgbasa ozi
Na weebụsaịtị a anyị na-eji kuki mgbasa ozi, nke na-enye anyị ohere ịnweta nchịkọta nke nsonaazụ mkpọsa ahụ. Emere nke a dabere na profaịlụ nke anyị mepụtara dabere na omume gị https://comme-un-pro.fr. Na kuki ndị a, gị, dị ka onye ọbịa webụsaịtị, jikọtara ya na NJ pụrụ iche mana kuki ndị a agaghị egosipụta omume na mmasị gị na ọrụ nke mgbasa ozi ahaziri iche.
5.4 Kuki ahia / nlekota kuki
Kuki ahia / nsuso kuki bu kuki ma obu udi ozo nke nchekwa nke obodo, ejiri meputa profaịlụ onye oru iji gosiputa mgbasa ozi ma obu soro onye oru a na webusaiti a ma obu otutu webusaiti maka ebumnuche obula.
N'ihi kuki ndị a ka akara akara kuki, anyị na-arịọ gị ikike itinye ha.
6. Etinye Kuki
Statistics (amaghị aha)
Anyị na-eji Matomo maka ọnụ ọgụgụ weebụsaịtị. Gụkwuo
Anaghị ekenye ndị ọzọ na data a.
Chekwaa NJ onye ọrụ pụrụ iche
Onyeka Onwenu *
Chekwaa NJ pụrụ iche
NJ njirimara Ntuziaka
Anyị na-eji Complianz maka ijikwa nkwenye kuki. Gụkwuo
Maka ozi ọzọ, biko gụọ Nkwupụta nzuzo Complianz.
Kpebisie ike ọkọlọtọ kuki iji gosipụta
Chekwaa nkwenye nkwenye kuki
Chekwaa ma ọ bụrụ na eleghara ozi anya
Chekwaa NJ nke usoro kuki nabatara
Divi (Gburugburu Gburugburu)
Nzube na-echere nyocha, Na-arụ ọrụ
Anyị na-eji Divi (Gburugburu mara mma) maka nhazi weebụsaịtị. Gụkwuo
Nzube na-echere nyocha
Anyị na-eji ET Editor maka ịmepụta weebụsaịtị. Gụkwuo
Anyị na-eji Ọmarịcha Njikọ maka njikwa ọdịnaya. Gụkwuo
onye nleta prli_visitor
Anyị na-eji Yandex Metrica maka ọnụ ọgụgụ webụsaịtị. Gụkwuo
Statistics, Nchọpụta na-echere ebumnuche
Anyị na-eji Wistia maka igosipụta vidiyo. Gụkwuo
Maka ozi ọzọ, biko gụọ Nkwupụta nzuzo Wistia.
wistia-vidiyo-na-aga n'ihu- *
Chekwaa ma ọ bụrụ na onye ọrụ ahụla ọdịnaya agbakwunyere
A na-enyocha data ịkekọrịta data
Mgbe ị gara na webụsaịtị anyị nke mbụ, anyị ga-egosi gị windo mmapụta nwere nkọwa gbasara kuki. Ozugbo ịpịrị "Chekwa mmasị" ị na-enye anyị ikike iji ụdị nke kuki na ndọtị ị họrọ na windo mmapụta, dịka akọwara na iwu kuki a. Nwere ike kwụsịtụ ojiji nke kuki site na ihe nchọgharị gị, mana biko mara na weebụsaịtị anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ ọfụma.
7.1 Jikwaa ntọala nkwenye gị
8. Ikike gị gbasara data onwe onye
Have nwere ikike ndị a gbasara data nkeonwe gị:
I nwere ikike ịmata ihe mere eji chọọ data nkeonwe gị, ihe ga - eme ya na ogologo oge ọ ga - edebe ya.
Ikike nke ịnweta: ị nwere ikike ịnweta data nkeonwe gị nke anyị maara.
Ikike imezi: ị nwere ikike n'oge ọ bụla iji wuchaa, dozie, ehichapụ ma ọ bụ gbochie data nkeonwe gị.
Ọ bụrụ n’inye anyị nkwenye gị maka nhazi data gị, ị nwere ikike ịkagbu nkwenye a ma kpochapụ data nke gị.
Ikike ịnyefe data gị: ị nwere ikike ịrịọ data nkeonwe gị n'aka onye njikwa na ịnyefe ya na njikwa ọzọ.
Ikike ịjụ: ị nwere ike ịjụ nhazi nke data gị. Anyị ga-ekwenye, belụsọ na enwere ihe kpatara ị ga-eji mee ọgwụgwọ a.
Iji nweta ikike ndị a, biko kpọtụrụ anyị. Biko rụtụ aka na nkọwa kọntaktị na ala nke iwu kuki a. Ọ bụrụ na ị nwere mkpesa banyere otu anyị si arụ data gị, anyị ga-achọ ka a gwa gị, mana ị nwekwara ikike itinye mkpesa n'aka ndị nlekọta (ikike nchekwa data, dị ka EDPS).
9. Mee ọ rụọ ọrụ / gbanyụọ ma hichapụ kuki
Nwere ike iji ihe nchọgharị ịntanetị gị na-akpaghị aka ma ọ bụ jiri aka ihichapụ kuki. I nwekwara ike dee na kuki ụfọdụ enweghị ike itinye ya. Nhọrọ ọzọ bụ ịgbanwe ntọala nchọgharị ịntanetị gị ka ị nweta ozi oge ọ bụla etinye kuki. Maka ozi ndị ọzọ gbasara nhọrọ ndị a, lee ntuziaka ndị dị na ngalaba Enyemaka nke ihe nchọgharị gị.
Biko rịba ama na weebụsaịtị anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụrụ na kuki niile nwere nkwarụ. Ọ bụrụ na ihichapụ kuki na ihe nchọgharị gị, a ga-etinye ha ọzọ mgbe ị kwenyechara mgbe ị laghachiri na weebụsaịtị anyị.
10. Nkọwa kọntaktị
Maka ajụjụ na / ma ọ bụ nkọwa banyere iwu kuki anyị na nkwupụta a, biko kpọtụrụ anyị site na iji nkọwa kọntaktị ndị a:
Ejikọtara usoro iwu kuki a cookiedatabase.org 24 / 01 / 2022